“Xilli kasta ayaa la filan karaa fidno iyo dagaal, annaga Siilaanyo nama xukumo, Somalilandna ma nihin” Garaad C/llaahi Cali Ciid. – Radio Daljir
“Xilli kasta ayaa la filan karaa fidno iyo dagaal, annaga Siilaanyo nama xukumo, Somalilandna ma nihin” Garaad C/llaahi Cali Ciid.
Oktoobar 11, 2011 12:00 b 0
Ceerigaabo, Oct, 11- Afhayeenka isimada Puntland Garaad C/llaahi Cali Ciid ayaa si carro leh uga hadlay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo uu maalmahaan ku marayay deegaano ka mida gobollada Sool iyo Sanaag, waxaana garaadku uu tilmaamay inuu ergo u daray madaxweyne Siilaanto, si uu si nabad ah uga baxo guud ahaan gobolka Sanaag, taasina ay ku jirto masaaliixda iyo nabad-galyada gobolka.
Garaad C/llaahi Cali Ciid oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa mar uu ka hadlayay nabad-galyada deegaanka iyo xiisada ka alloonsan xilligaan, waxaa uu yiri “Xilli kasta ayaa la filan-karaa fidno iyo dagaal, anaga Siilaanyo nama xukumo Soomaalilandna ma nihin”.
Md. C/llaahi Cali Ciid ayaa dhanka kale sheegay in dhibaatada ugu daran ee ka taagan gobollada Sool iyo Sanaag ay hurinaysa dawladda Brietin, isla markaana socdaallada xilligaan uu deegaannadaasi ka wado Siilaanyo ay garab-wayn ku siinayso dawladda Brietine, waxaana garaadku uu hadalkiisa raaciyay in wax lala yaabo ay tahay faragalinta qaawan ee gobolladaasi ay Soomaaliland iyo xukuumada Brietin ay ka wadaan, sida garaadku hadalka u dhigay.
Afhayeenka isimada Puntland Garaad C/llaahi Cali Ciid ayaa dhanaca kale sheegay, in maal-mahaan uu ku sugnaa gobolka Sanaag, socdaalkiisuna uu salka ku hayo, sidii uu ula socon lahaa dhaq-dhaqaaqyada madaxweyne Siilaanyo iyo waftiga uu hoggaaminayo uu ka wado gobollada Sool iyo Sanaag. Waxaana uu intaasi garaadku ku daray in xiisad colaadeed laga dareemayo deegaanka, xilli kastana la filan karo dagaal iyo isku dhacyo ka dhaca degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag.
Radio, Daljir – Garowe
Heshiis horudhac ah oo laga gaaray hurgumadii colaadeed ee gobolka Karkaar iyo shirweyne loo ballamay.
Wasaaradda waxbarashada Puntland oo daah-furtay sanduuq dhaqaale ee ardayda ka dhamaysata waxbarashada dugsiyada sare ee Puntland.